बर्माकी यी चेलिको यो भाषणले खिच्यो संसारको ध्यान, सबैलाई गरिन यस्तो अपिल ! (भिडियो सहित) – Enepali Samchar
बर्माकी यी चेलिको यो भाषणले खिच्यो संसारको ध्यान, सबैलाई गरिन यस्तो अपिल ! (भिडियो सहित)
April 7, 2021 April 7, 2021 adminLeaveaComment on बर्माकी यी चेलिको यो भाषणले खिच्यो संसारको ध्यान, सबैलाई गरिन यस्तो अपिल ! (भिडियो सहित)
E nepaalisamchaae// बर्मेली सुन्दरीको भाषणले खिच्यो संसारको ध्यान, ‘हामीलाई हाम्रो नेता अनि साँच्चैको प्रजातन्त्र चाहियो’
सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएका महिलाहरूको भाषण समाचारको हेडलाइन बिरलै बन्छन् । तर, गत साता यस्तै प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीको भाषणले तमाम राजनीतिक घटनालाई पछि पार्दै गनेमानेका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा स्थान ओगट्याे ।
मिस ग्रान्ड म्यानमार ह्यान ले (Han Lay) ले देशमा सेनाको कथित अत्याचारविरुद्ध बाेलेका कुराले संसारकै ध्यान खिचेको हो ।
‘आज मेरो देश म्यानमारमा… कैयौं मानिस मारिइरहेका छन्’, थाइल्याण्डमा भएको मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल २०२० समारोहमा ह्यानले भनिन्, ‘कृपया म्यानमारलाई मद्दत गरिदिनोस्, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग तत्कालै चाहिएको छ ।’
सैन्य कू को विरोधमा सडकमा उत्रेका दसौँ हजार प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सेनाले पानीको फोहराले हान्यो । विरोध नरोकिएपछि सेना र प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि रबरको गोली चलाउन थाले ।
प्रदर्शन अझै चर्किँदै गएपछि असली गोली चलाउन थालियो । गत शनिबार म्यानमारका लागि सबैभन्दा खराब दिन थियो, जुन दिन सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिए ।
पछिल्लो गतिविधि नियालिरहेको स्थानीय एक समूहले दुई महिनायता जारी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पाँच सयभन्दा बढी रहेको बताएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार मारिएकामध्ये ४३ बालबालिका थिए ।
ह्यान ले यङ्गोन विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञानकी छात्रा हुन् । उनले आफ्नो मातृभूमिबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गर्ने निधो गरेकी छन् । यसका लागि उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताको मञ्च चुनिन् ।
‘म्यानमारमा पत्रकारहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ…त्यसैले आफ्नो देशमा जे भइरहेको छ, त्यसको विरोधमा आवाज उठाउने निधो गरेँ’, बीबीसीसितको फोन संवादमा उनले भनिन् ।
आफू खतराउन्मुख भएकोप्रति उनी थाइल्याण्ड आउनुअघि नै सचेत थिइन् । उनले सोचिसकेकी थिइन्, आफू केही समय देशबाहिरै रहनुपर्ने हुन सक्छ ।
ह्यानको चिन्ता विना कारणकाे भने होइन । गत साता सुरक्षा बलले सेलिब्रेटी, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली व्यक्ति र दुई पत्रकारसहित १८ जनालाई गिरफ्तारीका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । जजसको विरुद्ध ‘अरेस्ट वारेन्ट’ जारी भएको थियो, सबैले सैन्य कूविरुद्ध लेखेका थिए ।
सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू मलाई धम्की दिइरहेका छन् । म्यानमारको जेल म फर्किने दिन कुरिरहेको उनीहरू बताउँदैछन्’, उनले भनिन् ।
आफूसँगै विरोध प्रदर्शनमा सहभागी केही विद्यार्थी अहिले जेलमा रहेका ह्यानले बताइन् । कार्यकर्ताहरूको समूह असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिक प्रिजनर (एएपीपी)का अनुसार सैन्य कुपछि कम्तिमा २ हजार ५ सय मानिस गिरफ्तार भएका छन् ।
हालसम्म उनको परिवार सुरक्षित नै छ । तर, अहिले म्यानमारमा इन्टरनेट राम्रो नभएकाले परिवारजनसँग सम्पर्क गर्न गाह्रो परिरहेको उनले बताइन् । उनले बीबीसीसँग आग्रह गरिन्, ‘मेरो परिवारको सुरक्षाका लागि म बस्ने शहरको नाम नछापिदिनु होला ।’
सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएकाहरू अक्सर राजनीतिक टिकाटिप्पणीसँग बच्छन् । तर, ह्यानले यो सार्वजनिक मञ्चबाट राजनीतिक बयान मात्र दिएकी छैनन्, म्यानमारको सेनाको चर्को आलोचनासमेत गरेकी छन् ।
साथै उनले ‘विन द रिभोलुसन’ (क्रान्ति जित्न) प्रतियोगिताको आधिकारिक च्यानलमा फ्यान्ससँग अन्तर्वार्ताका लागि आग्रह पनि गरेकी छन् ।
प्रतियोगिताभन्दा पहिला मिस ग्रान्ड कम्बोडिया लीव चिलीले आफ्ना समर्थकसँग भनेकी थिइन्, ‘तपाईंहरू राजनीतिबाट टाढै रहनुहोला ।’
गत साता म्यानमारको सेनाले सू चीमाथि देशको आधिकारिक गाेप्य ऐनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । यो आरोप पुष्टि भए कम्तिमा १४ वर्षको सजाय सुनाइन सक्छ ।
ह्यानले पहिला ग्र्याजुएसनको पढाइ पूरा गरेपछि फ्लाइट अन्टेडेन्ट काे तालिम गर्ने योजना बनाएकी थिइन् । तर, अब उनी कुन बाटाे अँगाल्ने अन्याेलमा छिन् ।
कतिपय मानिसले उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन भनिरहेका छन् । तर, उनी राजनीतिमा आफूले केही गर्न सकुँला भन्नेमा विश्वस्त छैनन् ।
अहिलेका लागि आफ्नो देशको हालतबारे आवाज उठाइरहने प्रण उनले गरेकी छन् । ‘यो मानवताविरुद्धको अपराध हो ।
त्यसैले हामी चाहन्छौँ, यो मामिलामा संयुक्त राष्ट्र संघले हस्तक्षेप गरोस्’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई हाम्रो नेता फिर्ता चाहियो, अनि हामी वास्तविक प्रजातन्त्र चाहन्छौँ ।’ (बीबीसीका जर्ज राइटकाे रिपाेर्ट)
झन्डै लाखमा कारोबार भइरहेको सुनको भाउ,आज भने अचम्म पार्ने किसिमले यस्तो भयो !